२०७६ कार्तिक २९ शुक्रबार ०९:४०:००
हिन्दूराष्ट्रको माग गर्दै राप्रपा संयुक्तले जनकपुरबाट जागरण अभियान सुरु गरेको छ । सबै धर्मबीच समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्रको माग गर्दै पार्टीले बिहीबार स्थानीय जानकी मन्दिरबाट धार्मिक जागरण अभियान सुरु गरेको हो ।
अभियानमा राप्रपा (संयुक्त)का नेताहरू पशुपतिशमशेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, अभिनेत्री एवं राप्रपा (संयुक्त)की नेत्री रेखा थापालगायत सहभागी थिए । जागरण अभियानको शुभारम्भ गर्दै पार्टीका अध्यक्ष राणाले विगतमा विश्वमै एक मात्र हिन्दूराष्ट्र नेपाल रहेकाले पुनः सो कायम हुनुपर्ने बताए ।
हिन्दूराष्ट्र कायम नभएसम्म चरणबद्ध संघर्ष गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सनातन सर्वधर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र कायम गर’ भन्ने मूल नारासहित जानकी बुद्ध रथयात्राको सुरुवात गर्दै अध्यक्ष राणाले धर्म र संस्कृतिमाथि प्रहार गरी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्नुबाहेकको विकल्प छैन ।’ नेपाल हिन्दूराष्ट्र भएमा भारत र चीनसमेतले स्वागत गर्ने अध्यक्ष राणाले दाबी गरे ।
त्यस्तै, अर्का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संविधानतः नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र स्थापना गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि चरणबद्ध अभियान थालेको जनाए । विभिन्न शक्ति, कांग्रेस र नेकपाको षड्यन्त्रले गर्दा हिन्दूराष्ट्र गुमाउनुपरेको उनको भनाइ थियो ।